နိုင်ဂျာ - "အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရမ်းမဟာမိတ်များနှင့်ပြိုင်ဘက်အကြား": Seini Oumarou, အ tightrope - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » မူဝါဒ "နိုင်ဂျာ -" သရမ်းမဟာမိတ်နှင့်အပြုသဘောဆောင်ပြိုင်ဘက်အကြား ": Seini Oumarou, အ tightrope - JeuneAfrique.com
နိုင်ဂျာ - "သရမ်းမဟာမိတ်များနှင့်ပြိုင်ဘက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြား": Seini Oumarou, အ tightrope - JeuneAfrique.com
Seini Oumarou © Tagaza Djibo / ဂျေအေ
တတိယလူကိုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲ 2016, Seini Oumarou Mahamadou Issoufou Hama Amadou တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးနောက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအအများစုနှင့်အတိုက်အခံများအကြား, ဤသည်နိုင်ငံရေးသစ္စာပေါ်မှုန်ဝါးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
69 နှစ်များတွင်ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်ကောင်းပိုပြီးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ Seini Oumarou သည်သူ၏အနှစ်သက်ဆုံးသောနိုင်ငံရေးလက်နက်တိတ်ဆိတ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သောလူသားအနည်းငယ်သာပြောတတ်ဆိုသညျကားစေရန်။ သူရက်ချိန်းလက်ခံသောအခါ, က cancel သာ. ကောင်း၏။ ယင်း၏တည်နေရာသေးဆွေးနွေးမှု၏ရှည်လျားသောနာရီထိုက်တန်ပါတယ်။
သမ္မတ 2016 အတွက်တတိယလူကိုသူ (Copa) ပြောင်းဖို့ညွန့်ပေါင်းအတိုက်အခံအတွင်းဒုတိယအကျော့ Hama Amadou ထောက်ခံခဲ့သည်။ function ကို: Society ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှု (NMSS ဟောင်းပါတီ Tandja) ကိုဆုရှင်၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံ, Mahamadou Issoufou ၏ဦးခေါင်းကိုခင်မှာ သမ်မတနိုငျငံရဲ့သမ်မတ၏အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်.
သမ္မတအိမ်တော်အိုင်ဗရီကို့စ်: အသက်ကန့်သတ်မယ့်ပြန်လာဦးတည်? - JeuneAfrique.com
ရိုးရာခေါင်းဆောင်များ Fako မြို့ဝန်နှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်
Foot OM – OM : Sans CdL, Nabil Djellit ridiculise Marseille et son palmarès ! – FOOT 01